C. Mukurara mode, tinya chero kiyi kuti umuke.
D. Mukana wakareruka wekurara, tinya bhatani kuti umuke uye upindure kune tv bhokisi panguva imwe chete.
Remote control inosanganisira 44 mabhatani uye chiratidzo chechiedza. Iko mashandiro uye mirairo zvinotevera:
Chinongedzo chine hukama
Chainless Dhinda bhatani nekukurumidza Chiedza chitsvuku chinopenya ka5
Dhinda uye bata bhatani Chiedza chitsvuku chinopenya ka5
Chained Dhinda chero kiyi pane iri kure, mwenje wechiedza enderera, chiedza achadzimwa riinhi kusunungura Mwenje mutsvuku unogara uripo
Inzwi rinoshanda ON Mwenje wechiedza unogara uripo
Dhinda pikicha yekubatanidzas Rambi dzvuku rinopenya zvishoma nezvishoma mushure mematatu
Paired zvinobudirira Rambi dzvuku rinogara kwe3s uyezve rinodzima
Kubatanidza kwakundikana Chiedza chitsvuku chinopenya, ipapo anobuda mushure 60s timeout
Kana bhatiri voltage yeremote control iri yakaderera pane yakatarwa (2.4V), tinya chero bhatani Chiedza chitsvuku chinopenya nekukurumidza kwemasekonzi mashanu
Kubatanidza Dhinda uye bata mabhatani e "HOME + BACK", mwenje unoratidza kamwe chete wozodzima, masekonzi matatu gare gare mwenje wechiedza unopenya zvishoma nezvishoma, wakamirira pairing neTV bhokisi.
Paired zvinobudirira Chiedza chinoratidza chinogara chakavhenekwa kwe3s, uye iyo pairing modhi yabuda, ipapo mwenje wechiedza wabviswa
Kubatanidza kwakundikana Rongedza otomatiki iyo pairing mode mushure memasekondi makumi matanhatu
Paired zita rezita “BT048D-STB”
B. Kubatanidza zvinodiwa:
Kana remote irikubvisa 2 * AAA bhatiri, tinya wobata mabhatani e "HOME" + "BACK" panguva imwe chete kwemasekonzi matatu, mwenje wechiratidzo unopenya nekukasira, wobva waburitsa mabhatani kuti upinde pairing mode; iyo pairing yakabudirira, iyo LED yakadzimwa; Kana iyo pairing ikakundikana, uye ichazongoerekana yabuda pairing mode mushure memasekondi makumi matanhatu, ipapo mwenje wechiedza wabviswa
C. Zvimwe zvinodiwa:
Mushure mekure kureremendi uye bhokisi reTV zvinobudirira kupedzisa Bluetooth pairing iyo yeBluetooth yekubatanidza ruzivo haizorasike, uye chinongedzo chinogona kudzoserwa otomatiki mushure mekuti kure kure kudzima.
Iyo otomatiki yekudzoreredza yekubatanidza nguva inguva -5S
Nzira yekurara uye kumuka
Yakaderera bhatiri ruzivo
A. Kana Vbat <= 2.4V, iyo yekudzivirira iri mune yakaderera simba mamiriro; bhatani parinosunungurwa mune yakaderera simba mamiriro, iyo chiratidzo chiratidzo mwenje inopenya ka5 nekukurumidza kukurumidza;
BBVbat <= 2.2V, iyo yekumusoro control inodzima iyo MCU, uye zvinorambidzwa kuenderera kure remote control kushandiswa;
Kudzidza mashandiro: Matanho anotevera anoshandisa bhatani remagetsi rebhuruu re STB remota yekudzidzira kudzidza bhatani remagetsi yeTV remote control semuenzaniso kuratidza basa rekudzidza reSTB. Matanho chaiwo anotevera:
Dhinda iyo Setting bhatani (MUTE bhatani) yeiyo STB remote control kweanenge matatu masekonzi uye wozoiburitsa kusvikira iyo chiratidzo chiratidzo ichiramba ichienderera.
Zvinoreva kuti STB yekudzivirira kure yapinda munzira yekudzidza.
2. Dhinda bhatani rebhuruu "simba" reiyo set-yepamusoro bhokisi kure kudzora kwe1 sekondi, mwenje wechiyero unotanga kupenya, zvichiratidza kuti iyo set-yepamusoro bhokisi riri kure kutonga kunogona kugamuchira zviratidzo.
3. Rongedza infrared emitters eiri maviri maremote control (mukati me3cm), uye tinya bhatani remagetsi eTV remote control kwemasekonzi matatu.
Kana mwenje wechiyero cheiyo set-yepamusoro bhokisi kure kure ichipenya katatu nekukasira uye ichiramba iripo, zvinoreva kuti kudzidza kuri kubudirira.
Kana iyo chiratidzo chinoratidza chekure kure kutonga kweiyo set-yepamusoro bhokisi haina kupenya katatu nekukurumidza, zvinoreva kuti nhanho yekudzidza yatadza. Ndapota dzokorora nhanho 2-3
4. Dzokorora nhanho 2-3 kuti udzidze mamwe matatu makiyi.
5. Mushure mekunge matanho ekudzidza abudirira, tinya bhatani rakamisikidzwa (bhatani reMUTE) kuchengetedza macode ebasa uye kubuda munzira yekudzidza.
Uye mabhatani akadzidza anogona kushandisa TV zvakajairika.
Pashure: Wireless Midhiya bhatani mudhiraivho mutyairi wemota mudhudhudhu bhasikoro
Zvadaro: Multi-basa BLE V5.0 mudhiraivho kure kudzora mimhanzi yekutamba kutonga